Xashiishka loo isticmaalo Dadka Waaweyn ee Illinois - Sharci-galinta Marijuana ee Illinois
Adeegsiga Dadka Waaweyn ee Illinois ee Xashiiska Cannabis
Kani waa Soo koobitaanka Adeegga Dadka Waaweyn ee ka socda JB Pritzker laga bilaabo Maajo, 2019. Taas oo noqotay sharci ka duwan.
Haddii aad rabto a Liisanka qaybinta ee Illinois - halkan guji.
Hadaad rabto a ruqsadda kobcinta farsamada gacanta ee Illinois - dhagsii halkan.
Goorma iyo sidee ayay Illinois sharciyeeyn doontaa Adeegsiga Dadka Waaweyn ee Marijuana?
Laga bilaabo Janaayo 1, 2020, dadka waaweyn ee da'doodu ka weyn tahay 21 waxay awood u yeelan doonaan inay si sharci ah u iibsadaan cannabis si loogu isticmaalo madadaalada kana soo dirsado kuwa shati u leh guud ahaan gobolka Illinois.
Loogu talagalay biil 522 oo buuxa Riix Halkan
Lahaanshaha xashiishka ma aha mid aan xadidnayn, ku dhawaad ​​hal wiqiyadood oo xashiish ah ayaa si sharci ah u leh qof qaan-gaar ah oo deggan Illinois - maadaama burburka guryuhu isu-geyn yahay loona baahan yahay in lagu daro, marka laga reebo kororka guriga.
Dadka degan Illinois
30 garaam marijuana ubax
5 garaam xashiishad
500 mg oo ah xashiishadda dawooyinka cannabis THC; ama
5 dhir si ay u degto Dadka Deggan Illinois
Dadka aan deganayn Illinois
kala badh lacagta sida dadka deggan Illinois
guri uma dhisna dadka aan degganeyn
Xashiishka Isticmaalka Dadka Waaweyni Ma Bedeleyso Maandooriyaha Caafimaadka ee Illinois
Sharci-dejinta Illinois ee Marijuana ayaa Dhiirrigelinaya Sinnaanta
The sharciyeynta xashiishadda cannabis ee Illinois sidoo kale waxay raadineysaa inay xalliso caddaalad darrooyinkii hore iyadoo la abuurayo dadka ku soo galay suuqa xashiishadda ee "codsadayaasha sinnaanta bulshada." $ 20 milyan oo doollar oo ah amaah amaah dulsaarasho hoose ah ayaa maamuli doonta Waaxda Ganacsiga iyo Fursadda Dhaqaale (DCEO) oo loogu talagay “codsadayaasha sinnaanta bulshada”.
Codsadaha Sinnaanta Bulshada ee Sharciga Xashiishka Ilmaha
Codsadaha sinnaanta bulshada ayaa ah degane Illinois oo la kulma ugu yaraan mid ka mid ah shuruudaha soo socda:
Codsade ahaan ugu yaraan 51 boqolkiiba lahaanshaha iyo xakamaynta hal ama in ka badan oo shaqsiyaad ah oo deggenaa ugu yaraan 5 ka mid ah 10kii sano ee la soo dhaafey ee aagga sida muuqata saamaynta ugu leh.
Codsadeha leh ugu yaraan 51 boqolkiiba lahaanshaha iyo xakameynta hal ama in kabadan oo shaqsiyaad ah oo loo qabtay, lagu xukumay, ama u xukumay in uu noqdo waardiyaha maxkamadda dhallaanka wixii danbi ah ee u qalma in lagu siidaayo sida ku xusan Xeerkan ama xubin ka mid ah qoyska saameyn ku yeeshay.
Waqtigaan la joogo aag aan sida ugu baahsan u saameeynin; ama
Lagugu xiray, xukumay, ama xukuntay in uu noqdo waardiye maxkamada dhalinyarada wixii dambi ah ee uqalma u qulqula sida uu dhigayo sharcigaan ama xubin kamid ah qoyska saameynta ku yeeshay.
25 ee 200 oo dhibcood “codsadayaasha cusub” waxay ku saleysnaan doonaan “Codsadayaalka Sinnaanta Bulshada.
Codsadeyaasha cusub ee Suuqa Cannabis ee Illinois
Waaxda Beeraha ayaa horumarin doonta - qaanuunka sameynta - xisaabinta si loo helo dhibco codsadeyaal cusub oo suurtagal ah oo loo adeegsado warshadaha xashiishadda xarumaha cusub ee wax soo saarka, miisaska cuntada iyo kuwa wax soo saara.
Buundooyinka waxay ku saleysan yihiin macluumaadka ka yimid sharciga, kaas oo lagu qiyaaso 200 oo dhibco ah. 25 dhibcood ayaa ka yimid Codsadayaasha Sinnaanta Bulshada, iyo 12 dhibco oo dheeri ah oo la siiyo codsadayaasha xashiishadda cusub ayaa lagu abaalmarin karaa:
Dhaqanka shaqada iyo shaqada (2)
Heshiiska nabada shaqaalaha (2)
Warbixinta bulshada deegaanka / deriska (2)
Qorshaha deegaanka (2)
Milkiilaha Illinois (2)
Qorshe lagu hawlgalinayo bulshada (2)
Xadidaadaha Lahaanshaha Ganacsiga Cannabis ee Illinois
Qofna ama hay'addu ma qaban karto wax sharci ah, loo siman yahay, ama dano faa'iido leh, si toos ah ama si aan toos ahayn, oo ka badan 3 xarumaha wax-soo-saarka ah.
Qofna ama hay'addu ma qaban karto wax sharci ah, loo siman yahay, ama dano faa'iido leh, si toos ah ama si aan toos ahayn, ah in ka badan 10 urur oo wax diidaya.
Looma fidin karo shati farshaxan gacmeed shaqsi kasta ama hay'ad leh in ka badan 10% danayn xarunta wax beerista .La siin maayo ruqsad shaqsiyaadka shaqsiyaadka ama inka badan 10% daneynaya xarunta wax soo saarka.
Qofna ama hay'addu ma qaban karto wax sharci ah, sinnaan ah, lahaansho, ama dano faa iido ah, si toos ah ama si aan toos ahayn, oo ka badan hal ruqsad farsamo gacmeedyada sida ku xusan qodobkaan.
Samaynta "codsadaha sinnaanta bulshada" ee liisanka
Codsadaha sinnaanta bulshada waa degane Illinois oo buuxiyo mid ka mid ah shuruudaha soo socda:
Codsadeha leh ugu yaraan 51 boqolkiiba lahaanshaha iyo xakameynta hal ama in kabadan shaqsiyaadka dagganaa ugu yaraan 5 ka mid ah 10kii sano ee la soo dhaafey aagga sida saxda ah u saameeyay.
Codsadeha leh ugu yaraan 51 boqolkiiba lahaanshaha iyo xakameynta hal ama in ka badan oo shaqsiyaad ah oo loo qabtay, lagu xukumay, ama u xukumay in uu noqdo waardiyaha maxkamadda dhallaanka wixii danbi ah ee u qalma in lagu siidaayo sida ku xusan Xeerkan ama xubin ka mid ah qoyska saameynta leh. ;
Codsadeyaasha leh ugu yaraan 10 shaqaale waqti-buuxa ah, codsade leh ugu yaraan 51% shaqaalaha hadda jira kuwaas oo:
dadka da'da ah ee loo yaqaan 'illina' oo loo adeegsado soo koobis loogu talagalay sharciga xashiishadda cusub
Codsiga loogu tala galay soo galeyaasha ku cusub dadka waaweyn ee Illinois ayaa isticmaala suuqa xashiishka
Habka loo adeegsado iskudhiska miinada. (Waaxda Beeraha ayaa horumarin doonta hanaan la mid ah iyada oo loo marayo nidaamka burburka ee xarumaha beerista, soo-saareyaasha, iyo kuwa wax beero.) Sharciga waxaa ku jira hanaanka dhibcaha ee IDFPR u adeegsan doontaa dib u eegista codsiyada.
Isugeyn 200 oo dhibcood, 25 dhibcood ayaa si gaar ah loogu talagalay codsadayaasha u qalma sida "codsadayaasha sinnaanta bulshada."
IDFPR waxay ku abaalmarin kartaa ilaa 12 dhibco abaalmarin oo la siiyo codsadayaasha waxqabadka la doorbiday, laakiin aan loo baahnayn, waxqabadyo. Dhibcaha gunnada waxaa kaliya lagu bixin doonaa haddii ay waaxda hesho tiro badan oo dalabyo ah oo buuxiya tirada ugu yar ee dhibco ee loo baahan yahay.
Ka dhaafida lacagta
Qaybta Maaliyadeed iyo Xeerarka Xirfadeed iyo Waaxda Beeraha ayaa ka dhaafi doona 50 boqolkiiba wixii ah ajuurada aan la soo celin karin ee liisanka ah (illaa 2 dalab) iyo wixii ajuuro ah oo aan lagu soo celin karin ee la xidhiidha iibsashada laysanka si loogu hawlgalo aasaaska ganacsiga xashiishadda (ilaa laba shati) haddii codsadayaasha sinnaanta bulshada ay buuxiyeen shuruudo gaar ah.
Hoos u dhigidda kharashaadka horudhaca ah ee shatiyada cusub ee 'Dispensing licens'
Codsadayaasha hela rukhsad bixinta sharuud-bixinta ee shardiga leh waxay lahaan doonaan 180 maalmood laga bilaabo taariikhda abaalmarinta la aqoonsado goob muuqaal ahaan ah oo loogu talagalay soo-gudbinta hay'adda dukaamanka tafaariiqda marka soo galayaasha cusub loo oggolaado suuqa. Tani waxay yareyn doontaa kharashyada la xiriira soo gelitaanka warshadaha.
KU SOO DHAWEYNTA Sinaanta IN ILLINOIS INTAAN CANABIS UGU SAMEEYO MADAXWEYNAHA
Habka soo socda waxaa loogu talagalay in lagu hubiyo suuqa ugu caddaaladda badan ee dalka.
Ogolaanshaha hore ee qaan gaarka ah ee ruqsada loo isticmaalo dadka haysta liisanka xashiishadda cannabis
Jadwalka waqtiga rukhsaynta
Ururada wax soo beero:
Beeraleyda xashiishadda caafimaadka ayaa dalban kara liisan muddo 60 maalmood gudahooda ah laga bilaabo taariikhda uu dhaqangalay Sharciga.
Shatiyada waxaa loo qeybin doonaa codsadayaasha u qalma 45 maalmood gudahood.
Ururada wax aruurinta:
Kariyeyaasha daawada cannabis ayaa dalban kara laysan 60 maalmood gudahood laga bilaabo taariikhda dhaqangalka Sharciga.
Shatiyada waxaa loo qeybin doonaa codsadayaasha u qalma 14 maalmood gudahood.
Iibinta xashiishadda isticmaalka dadka waaweyn waxay bilaaban doontaa Janaayo 1, 2020.
Hay'adahani waxay dalban karaan liisanka labaad meel cusub isla halbeegyo isku mid ah.
Bixinta kharashyada ruqsadaha hore ee oggolaanshaha isticmaalka ruqsadaha dadka waaweyn
Lacagta ogolaanshaha aan la soo celin karin: $ 100,000
Kharajka horumarinta ganacsiga ganacsiga Cannabis: 5% wadarta iibka u dhexeeya 1da Luulyo, 2018 illaa Luulyo 1, 2019 ama $ 500,000, hadba kan ka yar.
Lacagta ogolaanshaha aan la soo celin karin: $ 30,000
Kharajka horumarinta ganacsiga ganacsiga Cannabis: 3% wadarta iibka u dhexeeya 1da Luulyo, 2018 illaa Luulyo 1, 2019 ama $ 100,000, hadba kan ka yar.
Lacagta ogolaanshaha aan la soo celin karin: 30,000
Kharajka horumarinta ganacsiga ee xashiishadda: $ 200,000
Dadka cusub ee ku soo galay dadka waaweyn waxay isticmaalaan xashiishadda cannabis
Dadka wax soo iibsada
Jadwalka Waqtiga Balaarinta Ganacsiga Cannabis ee Cusub ee Illinois
Qaybta Sharciga Maaliyadeed iyo Xirfadeed
Meey 1, 2020: Hay'addu waxay ku siisaa ruqsooyin ilaa 75 urur oo ah kuwa dadka u fidiya adeegyada cusub
Luulyo 1, 2020: Hay'addu waxay ku abaalmarineysaa ilaa 40 rukhsad ee soo saareyaasha, illaa 40 shati oo loogu talagalay kuwa wax ka shaqeeya, iyo ruqsadaha shirkadaha gaadiidka.
Diseembar 21, 2021: Hay'addu waxay abaalmarino siisaa 110 shati oo loogu talagalay ururada u xilsaara ee cusub
Diseembar 21, 2021: Hay'addu waxay abaalmarin ku bixisaa ilaa 60 shati oo loogu talo galay kuwa wax xaraasha, ilaa iyo 60 shati oo loogu talagalay kuwa sameeya, iyo ruqsadaha shirkadaha gaadiidka.
Ruqsad siinta dadka ku soo galay suuqa cusub ee xashiishadda cannabis ee Illinois
Lacagta aan la soo celin karin $ 5,000
Lacagta laysanka $ 40,000
Lacagta laysanka $ 10,000
Lacagta laysanka $ 30,000
KU SOO DHAWEYNTA XIRIIRADA LAGU SAMEEYAY INUU KA SOO JOOJIYO BAARLAMAANKA
Soojeedinta ayaa abuuri doonta barnaamij deeq cusub ah, Soo celinta Barnaamijyadeena Bulshooyinka (ROC), si loo maalgaliyo bulshooyinka dhibaatada ugu badan soo gaarsiiyey siyaasadaha daroogada ee takooraya.
Guudmarka barnaamijka ROC
ICJIA waxay magacaabi doontaa "ROC Areas" ama meelaha ay codsaduhu xaq u yeelan doono inay ku dalbadaan maalgelinta gobolka iyada oo loo marayo Guddiga ROC.
Golaha ROC wuxuu ka koobnaan doonaa in ka badan 22 xubnood waxaana gudoominaya Guddoomiyaha Gobolka, ama wakiilkiisa, iyo Xeer Ilaaliyaha Guud, ama wakiilkiisa.
Guddiga ROC wuxuu horumarin doonaa codsi deeq, codsiyo codsiyo ah oo laga helayo Meelaha ROC u qalmana, wuxuu u qaybin doonaa deeqaha gobolka oo dhan, wuxuuna kormeeri doonaa oo qiimeyn ku sameyn doonaa barnaamijyada ROC.
Guddiga ROC wuxuu u gaarsiin doonaa warbixin sanadeed Xafiiska Gobolka wax ku saabsan horumarkiisa.
DIIWAAN GELINTA DIIWAANKA CANABIS EE ILLINOIS
Dembiyadaan gooni gooni ah ee soo socdaa waxay mutaysteen baabiin
Qeybta 4 Haysashada (waa sharci darro in qof kasta uu si ula kac ah u yeesho xashiishadda tirada soo socota)
a. <10g Ku xadgudubka sharciga madaniga ah
Waxaa la siin karaa tijaabinta iyo eedeynta dismissed10 (a)
b. 10-30g Nooca B Misdemeanor
c. 30-100g Fasalka A Misdemeanor
d. 100-500g Fasalka 4 Felony 1-3 sano
Qeybta 5 Soosaaraha / Bixinta
(waa sharci darro in qof kastaa si ula kac ah u sameeyo, soo bandhigo, ama haysto ulajeeddadiisa ah inuu keeno ama soo saaro xashiishadda soosaarka soo socda
a. <2.5g Nooca B Misdemeanor
b. 2.5-10g Fasalka A Misdemeanor
c. 10-30g Fasalka 4 Felony
Qeybta 8 Dhirta (waa sharci darro ah in qof kastaa si ula kac ah u soo saaro ama haysto warshad cannabis sativa ilaa loo oggolaado ulajeeddooyinka baaritaanka)
a. <5 dhir Fasalka A Misdemeanor
b. 5-20 dhir Fasalka 4 Felony
Hawsha lagu tirtirayo Dembiyada Xashiishadda Cannabis ee Illinois
Soojeedintu waxay dejineysaa hanaan deg deg ah oo lagu bixinayo diiwaannada dambiyada ee shakhsiyaadka la qabtay, la xukumay, kormeer, ama tijaabo laga qaado dembiga ama heerka 4aad ee xad gudubka dambiyada ee Xakunka Cannabis. Himilooyinka aasaasiga ah ee qaybtani waa in (1) diiwaangelinta diiwaannada laxiriira xashiishadda cannabis, iyo (2) dib-u-dhigidda nidaamka.
Habka qulqulaha otomatiga ah ayaa u baahan waxyaabaha soo socda:
Waaxda Boliiska Gobolku waa inay cadeeysaa shaqsiyaadka qaba diiwaanada dambiga ee u qalma in la siidaayo isla markaana si otomaatig ah ay u ridaan diiwaanada xadgudubka yar labo sano gudahooda laga bilaabo taariikhda dhaqan galka Sharciga.
Gudahood 180 maalmood laga bilaabo taariikhda dhaqangelinta falkan, Waaxda Booliiska Gobolka waa in ay ogeysiisaa (a) xafiisyada xeerilaaliyaha ee mas'uulka ka ah dacwaynta dambiyada, (b) hayadaha fulinta sharciga maxalliga ah, iyo (c) Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Illinois caddeynta dhammaan shaqsiyaadka oo leh xad-gudubyo yar-yar oo mutaystay u-eryid.
Gudahood 180 maalmood laga soo helo ogeysiiska Waaxda Booliiska Gobolka, xafiisyada Qareenka Dowladaha ku habboon waa inay fayl gareyn doonaan amar soo jeedin ah maxkamadda oo raadineysa in la ceyriyo iyagoo ka wakiil ah shakhsiyaadka leh dambiyada u qalma. Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ayaa xereyn kara amarka la soo jeediyay haddii Qareenka Gobolku uusan sameyn.
180 maalmood gudahood kadib markay hesho amarka la soo jeediyey, maxkamadu waxay dib u eegeysaa amarkii la soo jeediyay waxayna amri doontaa uumiga maxkamada iyo diiwaanada meelmarinta sharciga hadii aysan go aan ka gaarin in falkaasi uusan ka soo bixin qeexitaan xadgudub yar.
Maxkamaddu waxay siin doontaa nuqulo amar ah Waaxda Booliska Gobolka, hay'adda xiritaanka, hayadaha cadaaladda ee la xiriira, iyo shaqsiga diiwaanka laga saaray.
Habka u-bixitaanka otomatiga ah laguma dabaqi karo shaqsiyaadka dambiga galay ama xad gudubyada culus ee heerka 4aad oo ay la socdaan dacwado aan ahayn dambi u qalmid. Shakhsiyaadka wata diiwaannadaas, iyo shakhsiyaadka ku jira duruufaha kale, waxay si gooni gooni ah uga codsan karaan maxkamadda in diiwaankooda la baabi'iyo.
XEERARKA SHAQAALAHA EE KU SAABSAN CANABIS IN ILLINOIS
Waxba kama jiraan qorshahan ka mamnuucaya loo shaqeeyayaasha inay qaataan siyaasadaha shaqada ee macquulka ah ee la xiriira sigaar cabista, isticmaalka, kaydinta ama isticmaalka xashiishadda goobta shaqada.
Ma jiraan wax soo jeedinta ah oo ka mamnuucaya loo shaqeeyayaasha inay edbiyaan shaqaalaha ama joojiyaan shaqaalaynta shaqaalaha taas oo ku xad gudubta shuruucda shaqada loo shaqeeyaha ama siyaasada goobta shaqada.
TAXAADKA CADAADISKA CUNTADA EE CIDDA EE ILLINOIS
Canshuuraha oo dhan waxaa lagu shubaa Sanduuqa Xeerarka Cannabis cusub
Dhiirrigelinta cashuurta mudnaanta leh
7% rasiidhada wadarta guud ee iibinta xashiishadda by beeraley, ka ganacsada farshaxan, ama processor si ay u gudbiso urur
Soo iibinta Xashiishka cashuur dhaafka:
10% qiimaha iibsiga - Xashiishka leh heer THC ama ka hooseysa 35%
20% qiimaha iibka - Dhamaan alaabada cannabis ayaa dhalisay
25% qiimaha iibsiga - Xashiishka leh heer THC oo ka sareysa 35%
Canshuurahan ayaa lagu dari doonaa dhammaan shaqooyinka kale, mudnaanta, ama canshuurta laga qaado canshuurta ay soo rogtay Gobolka Illinois ama shirkad kasta oo degmo ama hoosaad siyaasadeed.
Canshuur dhaaf xad dhaafka ah ee dowlada hoose:
Degmooyinka waxay soo saari karaan canshuur dhaaf xad dhaaf ah ilaa 3% kordhinta 0.25%
Degmooyinku waxay soo saari karaan canshuur dhaaf xad dhaaf ah ilaa 0.5% aagagga la isku daray ee kordhinta
Meelaha aan la aqoonsan waxay qaadan karaan canshuurta ka dhaafida iibsadaha illaa 3.5% kordhinta 0.25%
XULASHADA GOBOLKA SANADKA CANABIS
Waaxda Dakhliga ayaa bixin doonta qiyaasta dakhliga rasmiga ah ee FY20 maalmaha soo socda.
Dakhliga canshuurta waxaa lagu keydin doonaa Sanduuqa Xeerarka Cannabis cusub
Hay'adaha gobolka ee mas'uulka ka ah maareynta barnaamijka dadka waaweyn ee xashiishadda cannabis waxay heli doonaan agab ay ku daboolaan kharashaadka maamulka ee canshuuraha laga qaado barnaamijka.
Dhamaan dakhliga soo haray waxaa loo qoondeyn doonaa sida soo socota:
35% waxaa loo wareejin doonaa Sanduuqa Dakhliga Guud,
25% waxaa loo wareejin doonaa Dib-u-soo celinta Maaliyaddeena Bulsho si dib loogu dhiso bulshada,
20% waxaa loo gudbin doonaa sanduuq taageeraya caafimaadka dhimirka iyo adeegyada maandooriyaha
waaxaha caafimaadka deegaanka,
10% waxaa loo gudbin doonaa Santuukha xasilinta Miisaaniyadda si loo bixiyo dib-u-habeynta biilasha aan la bixin,
8% waxaa loo wareejin doonaa Tababarka Fulinta Sharciga Sharciyeed ee Illinois iyo Heerarka si loo abuuro barnaamij deeq xoojin sharci ah, iyo
2% waxaa loo gudbin doonaa Sanduuqa Daaweynta Daawada si loogu maalgeliyo waxbarashada dadweynaha iyo wacyi gelinta.
XUKUNKA ILLINOIS CANNABIS SHARCIYADA
Guddoomiyaha ayaa magacaabi doona Sarkaalka Korjoogteynta Xannaanada ee joogi doona IDFPR. Qofkaan, iyo kooxdiisa, ayaa yeelan doona awood ay ku soo saaraan sharciyo iyo talooyin sharciyeed oo khuseeya barnaamijka adeegsiga dadka waaweyn. Qofkani wuxuu sidoo kale isku duwi doonaa dadaallada ka dhexeeya hay'adaha gobolka ee ku lug leh sharciyeynta iyo canshuuraha iibinta xashiishadda ee Illinois.
Wuxuu mas'uul ka yahay hirgelinta iyo aruurinta canshuuraha la xiriira iibinta xashiishadda.
Masuul ka ah shati-siinta iyo kormeerista xarumaha wax-soo-saarka, tujaarrayaasha farsamada gacanta, ururinta howlaha, iyo ururada gaadiidka.
Wuxuu mas'uul ka yahay oggolaanshaha shaybaarrada baara xashiishadda
Masuul ka ah shati-siinta iyo kormeerka ururada fidinta.
Booliska Gobolka Illinois
Waxay mas'uul ka tahay sameynta baaritaanka asalka qof kasta oo ku lug leh qaybta xashiishadda cannabis ee shatiga leh.
Waxay mas'uul ka tahay dib u eegista qorshayaasha amniga ee dhammaan hay'adaha shatiga leh.
Waxay mas'uul ka tahay dib u eegista dhammaan macluumaadka diiwaanka taariikhda dembiyada iyo aqoonsashada dhammaan shaqsiyaadka leh xadgudubyo yaryar ee u qalma ka bixitaanka otomaatigga ah.
Waxay mas'uul ka tahay sameynta talooyinka ku saabsan digniinta caafimaadka iyo fududeynta guddiga La-talinta Caafimaadka Dadweynaha ee Xannaanada Caafimaadka Dadweynaha.
Waaxda Ganacsiga iyo Fursadda Dhaqaalaha
Masuul ka ah maareynta barnaamijka amaahda, barnaamijka deeqda, iyo kaalmada farsamada ee codsadayaasha sinnaanta bulshada.
Waaxda Adeegyada Dadweynaha
Waxay mas'uul ka tahay soo-jeedinta Guddiga Talosiinta Caafimaadka Dadweynaha ee Xannaanada Caafimaadka Dadweynaha ee ku saabsan daaweynta iyo kahortagga daweynta.
Masuul ka ah horumarinta iyo baahinta agabyada waxbarashada macaamiisha.
Masuul ka ah qaabeynta aagagga ROC ee gobolka oo dhan oo laga yaabo in laga codsado maalgalinta guddiga ROC ee dib u soo nooleynta bulshada.
CAAFIMAADKA DADWEYNAHA IYO AMNIGA EE ILLINOIS CANABIS
Labaatan boqolkiiba dakhliga ka soo baxa iibinta xashiishadda cannabis ayaa taageeri doonta dadaallada wax looga qabanayo maandooriyaha iyo caafimaadka maskaxda.
Xayiraadaha Xayeysiinta Ganacsiga Xashiishka
Ma jiro aasaaska ganacsiga cannabis ee meelaynaya ama joogtaynaya, ama sababi kara in la dhigo ama la ilaaliyo, xayeysiin, xashiishad ama shey kasta oo loo isticmaalo cannabis nooc kasta ha noqotee:
In ka yar 1,000 fiit oo u jirta wareega dugsiga, garoon ciyaareed, isbitaal, xarun caafimaad, xarunta madaddaalo ama xarun, xarunta daryeelka ilmaha, baarkinka dadweynaha ama maktabadda dadweynaha, ama qaab kasta oo gelitaan aan lagu xadidin qofka da'diisu tahay 21 sano ama ka weyn;
Marka lagu jiro ama lagu dhex qaadayo gaadiidka dadweynaha ama hoyga safarka dadweynaha;
On ama hanti dowladeed oo la leeyahay ama la leeyahay;
Kuwaasoo ka kooban macluumaad been ah ama marin habaabin ah, kor u qaadaya isticmaalka xad-dhaafka ah, kaasoo muujinaya qof ka yar da'da 21 sano ee cunaya xashiishadda cannabis, waxaa ku jira sawirka caleen xashiishad; ama
Waxay kujirtaa muuqaal kasta oo loo qorsheeyay ama ay u egtahay inay rafcaan ka qaaddo carruurta aan qaan gaarin, oo ay ku jiraan kartoonnada, boombalada, xayawaanka, ama carruurta, ama wax kasta oo u eg sawirro, jilayaal, ama weedho si caan ah loogu isticmaalo xayeysiinta carruurta, ama ku dayasho kasta oo baakad nacnac ah ama sumad-saar, ama dhiirrigeliya isticmaalka xashiishadda.
Xannibaadahaan ma quseeyaan farriimaha aan ganacsiga ahayn.
Shuruudaha Xirmooyinka ee Illinois Cannabis
Digniinaha soo socdaa waxay quseyn doonaan dhammaan waxyaabaha loo yaqaan 'cannabis': 'sheygan waxaa ku jira cannabis waxaana loogu talagalay dadka waaweyn 21 iyo wixii ka weyn. Isticmaalkiisu wuxuu wax u dhimayaa garashada waxayna caado u yeelan kartaa sameynta. Alaabtaani waa inaysan u adeegsan haweenka uurka leh ama naasnuujiya. Waa sharci darro in la iibiyo ama la siiyo shaykan shaqsi kasta, lagumana yaabo in lagu raro meel ka baxsan gobolka Illinois. Waa sharci darro in la wado baabuur iyada oo la adeegsanayo xashiishadda cannabis. Haysashada ama adeegsiga sheygan wuxuu ku qaadi karaa ganaaxyo sharciyeed weyn sharciyada qaarkood iyo qaanuunka federaaliga ah. ”
Dhammaan xashiishadda soo go'ay ee loogu talagalay in loogu qaybiyo meherka xashiishadda waa in lagu rido weel xidhan oo calaamadaysan.
Baakadaha shey kasta oo ay kujirto xashiishadda cannabis waa inay noqotaa mid u adkeysan carruurta iyo u-adkeysiga iftiinka ee waafaqsan heerarka hadda jira, oo ay ku jiraan halbeegyada Guddiga Ammaanka Macaamiisha Alaabta ay tilmaameyso Sharciga Ka-hortagga Sunta.
Calaamadda shey kasta oo loo isticmaalo daroogada cannabis waa inay kujirtaa, waxyaabo ay ka mid yihiin, "isticmaal" taariikhda ku taal sumadda, tirada xashiishadda cannabis ee ku jirta badeecada, iyo liiska waxyaabaha ku jira.
Dhammaan wax soo saarka cannabis waa inay ku jiraan bayaanno digniin loogu talagalay macaamiisha, oo cabirkoodu yahay mid la arki karo oo si muuqata ay ugu muuqan karaan macaamiisha baarayaan xirmo, oo aan sinaba looga hadli karin ama aan qarin karin.
Baakadaha waa ineysan ku jirin macluumaad ah:
Waa been ama marin habaabin;
Waxay kor u qaaddaa isticmaalka xad-dhaafka ah;
Waxay muujineysaa qof ka yar da'da 21 sano ee cunaysa xashiishadda;
Waxaa ku jira sawir kasta oo loo habeeyay ama ay u badan tahay inuu rafcaan ka qaato carruurta aan qaan gaarin, oo ay ku jiraan kartoonnada, boombalada, xayawaanka, ama carruurta, ama wax kasta oo u eg sawirro, jilayaal, ama weedho caan ka ah xayeysiinta carruurta, ama baakad kasta ama sumad kasta oo u eg mid u eg wax soo saar kasta oo loo isticmaali karo si nacnac ganacsi ahaan loo heli karo, ama dhiirrigelinaya isticmaalka xashiishadda;
Waxay kujirtaa shaabad kasta, calan, crest, jaakad hub, ama astaan ​​kale oo laga yaabo inay marin habaabiso macaamilka si ay u aaminsanaato in badeecada ay ansaxisay, sameysay ama isticmaashay Gobolka Illinois.
HOOS KA DHAGAYSO CANNABIS EE ILLINOIS
Qoysaska Illinois ayaa loo oggol yahay inay ku koraan illaa shan geedo xashiishad oo shuruudo gaar ah ah:
Ninka ganacsadaha ah waa qof weyn oo jira da'da 21 ama ka weyn,
Qofka ganacsadaha ahi wuxuu ku jiraa guri uu isagu leeyahay ama uu rukhsad ka haysto milkiilaha,
Beeraleygu wuxuu ku xaddidan yahay koritaanka 5 ama ka yar dhir,
Qofka ganacsaduhu waa inuu cannabis ku hayaa qol gooni ah oo ka fog xubnaha reerka ka yar 21, iyo
Qofka ganacsadaha ah waxaa laga mamnuucay inuu ku kobco xashiishadda aragtida bulshada.
SHARCIYADA XEERKA QOYSKA EE CARRUURTA KU SAMEE CANABIS IN ILLINOIS
Degmooyinku way gudbi karaan sharciyo ka mamnuucaya samaynta aagagga ay ku shaqeeyaan.
Waaxyada dowladda ee maxalliga ah waa inay ku dhaqmaan amarrada 'ka-goynta' muddo hal sano gudahooda ah laga bilaabo taariikhda dhaqan-galka sharciga ama ay ku xaddidan yihiin qaadashada qodobbada 'ka-goynta' aftiga maxalliga ah.
Degmooyinka waxay soo saari karaan xayiraad macquul ah oo ku saabsan xeryaha ruqsada ruqsada haysta, kuwa wax soo iibiya, kuwa ka shaqeeya, iyo warqadaha
Goor dhaw ayaan ku arki doonaa - si dhakhso leh haddii aad iska diiwaan geliso.